Manidina fiaramanidina hanenjika ireo mpandeha amoron-dranomasina Italiana nanaparitaka ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Manidina fiaramanidina hanenjika ireo mpandeha amoron-dranomasina Italiana nanaparitaka ny COVID-19
Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Zon'olombelona • Vaovao farany Italia • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Rehefa mahita olona voan'ny tazo ny drôna dia mampahafantatra azy ireo izany ary mampandre ny ekipan'ny mpanara-maso ara-pitsaboana, izay tonga teny amin'ilay toerana hanaovana fanadihadiana, izay mety hitarika fitsapana COVID-19.
Ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ao Roma dia mametraka drôna manidina eny amoron-dranomasina romana.
Manidina fiaramanidina hanamarina lavitra ny maripanan'ny mpandeha amoron-dranomasina any Italia.
Drôna dia hampiasaina hanarahana ny COVID-19 sy hisorohana ny vonjy taitra ara-pahasalamana.
Ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana any Roma, Italia dia mametaka drone hisidina manodidina ny morontsirak'i Ostia akaikin'i Roma, ary hijery ny mari-pana ho an'ny mpandeha amoron-dranomasina rehetra, mba hahitanao ireo olona tratry ny aretina COVID-19.
Ny drone 'mpitsabo' dia nokasaina hanao fisafoana ny morontsirak'i Ostia, ambanivohitr'i Roma, ny faran'ny herinandro teo, saingy nahemotra ilay andrana noho ny toetr'andro ratsy ho an'ny sabotsy sy alahady izao.
Araka ny Italiana tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana, ny drone dia "mandrefy" mandeha ho azy "ny mari-pana raha mivezivezy farafaharatsiny 25m ambonin'ny rano ary mijanona farafahakeliny 30m lavitra ny olona. Ny sidina fitsapana dia kasaina haharitra mandritra ny dimy ora, eo anelanelan'ny 11 maraina ka hatramin'ny 4 hariva.
"Rehefa mahita olona voan'ny tazo ny drôna dia mampahafantatra azy ireo izany ary manaitra ny ekipan'ny mpanara-maso ara-pitsaboana," hoy ireo tompon'andraikitra. "Tonga tany amin'ilay toerana ny dokotera mba hanaovana famotopotorana, izay mety hitarika fitsapana COVID-19."
Nampanantena ny tompon’andraikitra fa hanaja ny fiainana manokana, ary nilaza fa tsy ho fantatra ireo mpanao fialan-tsasatra manana mari-pana ara-dalàna.
Marta Branca, ny lohan'ny ASL Roma 3, manampahefana misahana ny fahasalamam-bahoaka izay manarona distrika maro eto an-drenivohitr'i Italia, dia nandà ny tsaho milaza fa hampiasaina hanenjehana ireo olona manely ny aretina ity fitaovana manidina ity.
"Fomba iray fotsiny io hahazoana antoka fa misy aretina na lozam-pifamoivoizana eo amoron-dranomasina na an-dranomasina hita eo noho eo ary tsy misy very na dia kely aza ny ezaka famonjena", hoy ny siokan'i Branca. “Maty toy izany ny raiko. Angamba, amin'ity drôna ity dia mbola ho eto izy. ”
Mandritra izany fotoana izany dia nanaiky ny lesoka sasany tamin'ny fifandraisan-davitra momba ilay hetsika i Branca, ary nanome toky fa hisoroka ny tsy fifankahazoan-kevitra amin'ny ho avy.